Allgedo.com » DHAGAYSO: Drs Fowsiyo oo maanta la dhaariyay hadal cusubna jeedisay
DHAGAYSO: Drs Fowsiyo oo maanta la dhaariyay hadal cusubna jeedisay
Print here| By: allgedo.com: Monday, November 19, 2012 // Jawaabaha waa la xiray
Wasiirka arimaha Dibbada ee dalka Soomaaliya, ahna R/wasaare ku xigeen Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa maanta si rasmi ah xilka kula wareegtay kadib markii xaflad ay ka dhacday xarunta Wasaarada Arimaha Dibada ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka arimaha dibbada Fowsiya Xaaji ayaa marka hore waxay hambalyo u jeedisay dhamaan shaqaalaha wasaaradaasi iyo wasiirkii hore ee wasaarada arimaha dibbada, iyadoo sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay xilkaan la wareegto.
Sidoo kale, waxay sheegtay inay la shaqeyn doonto dhamaan shaqaalaha wasaarada iyadoo sheegtay in dalka Soomaaliya ay wax badan u qaban doonto sida ay hadalka u dhigtay.
Iyadoo hadalkeeda Kaftsan uu ka muuqday ayay Tiri “Wasaaradaan waa mid aan kusoo dhex koray horta, Aabahey baa diblomaasi ahaan jiray, furay safaradii ugu horeysay ee Qaahira 1960″.
Hoos ka dhagayso Hadalka Drs Fowsiyo